Akụkọ Stephanie Shreve na Martech Zone |
Edemede site na Stephanie Shreve
Ụdị buru ibu na-enweta, ka akụkụ ndị na-emegharị emegharị na-apụta. Ụdị ndị a na-ere site na netwọk nke ndị na-ere ahịa mpaghara nwere usoro ihe mgbaru ọsọ azụmahịa dị mgbagwoju anya karị, ihe ndị ka mkpa, na ahụmahụ ịntanetị ị ga-atụle - site na akara ngosi ruo n'ọkwa mpaghara. Ụdị chọrọ ka achọpụta ya ngwa ngwa ma zụta ya. Ndị na-ere ahịa na-achọ ụzọ ọhụrụ, ọtụtụ okporo ụzọ ụkwụ, na ahịa na-abawanye. Ndị ahịa chọrọ nchịkọta ozi na-enweghị esemokwu na ịzụ ahịa - na ha chọrọ ya ngwa ngwa.